जीन्दगीलाई सतमार्गतिर निर्देशन गर्न चाहानुहुन्छ भने अपनाउनुहोस जीवन उपयोगी सुत्र ! – सुदूरखबर डटकम
जीन्दगीलाई सतमार्गतिर निर्देशन गर्न चाहानुहुन्छ भने अपनाउनुहोस जीवन उपयोगी सुत्र !
हस्तिनापुरका राजा धृतराष्ट्र( जो आँखा देख्दैन थिए) लाई सञ्जयले महाभारत युद्धका क्रममा भएका घटना क्रमको वर्णन गर्ने क्रममा प्राप्त भएको हो ।
सञ्जयलाई युद्ध भूमिमा नगई त्यहाँका सबै घटना र विवरण देख्नसक्ने दिव्य दृष्टि प्राप्त भएको थियो ।
गीता ऐतिहासिक ग्रन्थ महाभारतको भीष्मपर्व अन्तर्गत दिइएको उपनिषद हो । हिन्दुधर्ममा यसको विषेश महत्व रहिआएको छ ।